Iindaba - Umatshini wokugaya umbona weTehold
Umbona Milling Machine, nto leyo yiprojekthi kunye nophuhliso lomntu, umgubo wombona kuphakamisa abantu bazise izibonelelo. Umbona Flour Machine uphuhliso olukhawulezileyo kumazwe aphuhlisiweyo kwezolimo, senza umatshini wokugaya umbona phantse iminyaka eli-10 ukusukela ngo-2008 Uluntu ngoku kukhuphiswano kakhulu, Kule minyaka imbalwa idlulileyo, siye gqolo yasungula iteknoloji ukuhlangabezana neemfuno zemarike ezahlukeneyo. Sivelisa umatshini womgubo wombona ukusuka kumthamo omncinci weetoni ezi-5 ngosuku ukuya kwi-Full-auto Umbona wokugaya i-500 TPD. Ubungakanani obukhulu bokumiselwa okuphezulu, inqanaba lokugqibela lokukhupha umgubo kunye nomgangatho womgubo
Umbhobho Milling Machine
Kwi-Tehold, i-Afrika ifana nelizwe lesibini, ngenxa yabathengi abaninzi apho. EKenya, abantu abangama-90% batya umbona omhlophe njengokutya kwabo okutyiwayo "Ugali", umgubo uthengiswa nge-1 kg okanye ibhegi ye-2 kg, ibhali ngalinye lineengxowa ezili-12 Ngelixa eUganda, abantu bathanda umgubo wombona ocolekileyo. : Unokuvelisa iimveliso zokugqibela ezahlukeneyo ukuhlangabezana neemfuno zabathengi .Inkqubo yethu yomatshini wokugaya umbona, samkela i-degerminator ukuba ikhethe intsholongwane yombona kwicandelo lokucoca, kwaye abahloli bahlolisise ibanga lomgubo.Umgubo wombona kunye nokugaya umbona njengemveliso ikakhulu, yimveliso Ingqolowa yengqolowa kunye ne-bran. Umgubo wengqolowa kunye nomgubo wengqolowa ngamanye amaxesha usetyenziselwa ukwenza isidlo sakusasa，Ngelixa intsholongwane yombona inokukhethelwa ukwenza i-oyile kunye ne-bran yokwenza ukutya kwezilwanyana.
Xa uceba ukutyala isityalo sokugaya umgubo, nceda wenze uphando olusisiseko lwentengiso, njengokhozo oluhlaza kunye nemveliso yokugqibela kwintengiso yasekhaya, ukuba ucinga ngokuthumela ngaphandle, ungalibali ukuba abantu bathanda ukutya ntoni khona. unganqikazi ukuqhagamshelana nathi.